Burburka Doolarka..Barfasoor Ameerikaan ah Oo Sababta Sharxay | Xaqiiqonews
Burburka Doolarka..Barfasoor Ameerikaan ah Oo Sababta Sharxay
Barfasoor Mareykan ah ayaa sheegay in maalmaha u dhiman doolarka ay yihiin kuwo tirsan, isaga oo arimahaasi ku xoojiyey dhaqaala darrada laga dhaxlay Karoonaha, dhamaadka keydkii Mareykan iyo loolanka ganacsi ee Shiinaha iyo Mareykanka.
Warbixin lagu qoray Webseetka Ameerikaanka ah ee Bloomberg, ayaa waxaa ciwaan looga dhigay “burburka doolarka ee soo socda”, warbixinta dhaxdeeda ayuu Barfasoor Stephen Roach ka digay burbur ku socda qiimaha xaanshada doolarka, waxa uuna doodiisa ku xoojiyey dhowr sabab.
Doolarka Mareykanka ayaa horay ula dhibanaa baaba’ ku socday sanduuqa Keydka qaran Mareykanka, taasi oo iminka ay ugu sii darsantay mushkiladda dhaqaale ee Karoonaha, waxaa sii xigay saameynta dhaqaale ee Mareykanka uu ka dhaxlay dibad baxyada George Floyd.
Sidoo Kale Aqri..Mareykanka Oo Awoodiisa Gacantiisa Ku Burburinaya
Dhanka kale Khilaafka Shiinaha iyo Mareykanka ayaa kordhay, waana arinta soo dadjisay in laga dhawaajiyo “burburka Doolarka Mareykanka”.
Roach ayaa xusay in sanadkani 2020, uu hoos u dhcay Keydka qaranka 1.4%, taasi oo noqoneysa hoos u dhici ugu weynaa tan iyo sanadkii 2011.